Izay mandeha miadana no lasa lavitra | NewsMada
Izay mandeha miadana no lasa lavitra
Hanao ahoana ihany ny tohiny sy faran’izao ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Coronavirus izao? Mila fahazotoana sy fizotoana. Tsy afa-kaharitra sy miaritra anefa ny tena, raha tsy milamina sy tony. Mazava tsara izay lalana aleha sy ny tanjona tratrarina amin’izany: tsy mitsapatsapa, na manao fahoany fa fahoany.
Be izay fotoana sy ny lalana nodiavina izay, ny fihafiana, ny fiaretana… Efa ho roa volana izao. Nefa misy ihany ny mbola misavoritaka an-dalana, na tsy mitandrin-tena sady tsy mitsinjo ny hafa. Nefa hoe fahavalo tsy hita maso no iadiana: tsy mifidy olona na toerana sy fotoana, haingana sy mora mifindra…
Eo hatrany ny tsy fanarahana fepetra amin’izao fahamehana ara-pahasalamana izao: misy manao fanahy iniana, tsy miraharaha… Nefa tsy ny tenany ihany no voa amin’izany, fa ny manodidina na ny faritra misy azy; eny, mety ho firenena aza, sanatria. Izay no itandremana, ifampitenenana tsy ahalalana hasasarana.
Inona moa no ndeha itenenana na ampahatsiahivana izany? Amin’izao, misy ny minia misavorovoro an-toerana na mampisavorovoro ny hafa tsy amin’ny antony. Tsy inona no manetsika sy manesika azy amin’izany fa noho ny fijery tsy mitovy, ny tombontsoa manokana, ny toerana politika…
Sao misavorovoro amin’izany tsy amin’ny antony tokoa àry? Ny any ivelany efa tsy fidiny; ny ato anatiny, manampy trotraka. Iza no mahita na mahalala? Efa mety misy, sanatria, ny ampiasain’ny sasany any ho any amin’izay kendreny amin’izany. Tsy zava-baovao ny toy izany eo amin’ny tantaram-pirenena.
Hatramin’izao, ohatra, tsy mazava fa mbola mila fanadihadiana lalina ny amin’ny tarehimarika, momba ny valanaretina Coronavirus teto Madagasikara, tamin’ny herinandro lasa. Niteraka resabe sy nampisavoritaka an-toerana izany, mila fahamailoana. Ndrao diso fahavalo? Tsy olona, ohatra, no iadiana fa aretina.
Efa mazava ny lalana diavina sy ny tanjona tratrarina, fa izay mandeha miadana no lasa lavitra sy tonga.